PlayBox mamela anao hijery sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny fitaovanao tsy misy Jailbreak | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | Fampiharana iPhone, About us
Mazava fa ny Popcorn Time dia ho fiandohan'ny rindranasa hijerena ny atiny multimedia amin'ny iPhone sy iPad-nao. Ireo serivisy mamela ny fijerena sarimihetsika sy andian-dahatsoratra mampiasa tamba-jotra P2P dia mbola eo am-pelatanan'ilay tadio, fa na dia tsy mifarana amin'ny fampifanarahana ny filan'ny mpampiasa any amin'ny firenena toa an'i Espana aza ny indostria, dia mandeha hatrany ireo serivisy ireo na dia amin'ny sehatra mihidy aza. iOS. PlayBox dia safidy iray hafa izay vao niseho ary Manolotra anao sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny fitaovanao izy io fa tsy mila atao ny Jailbreak.
Izy io dia rindrambaiko noforonina tena tsara misy safidy maro sy katalaogy malalaka, eny, amin'ny teny anglisy daholo, na dia ahena aza io olana io amin'ny alàlan'ny fisafidianana dikanteny amin'ny fiteny samihafa. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny kalitaon'ny streaming, miaraka amin'ny atiny marobe amin'ny HD sy ny kalitao ambany ho an'ny fifandraisana miadana kokoa. Afaka mahita sarimihetsika maro ianao, andian-dahatsoratra ary faritra iray natokana manokana ho an'ireo ankizy manana sarimiaina. Azonao atao ihany koa ny mametra ny fidiran'ny ankizy kely amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fifehezana ny ray aman-dreny ampidirin'ny rindrambaiko.
Subtitles misy ny mety fampifanarahana azy ireo amin'ilay rindrambaiko raha toa ka mahita lag ianao, mifanentana amin'ny Apple TV sy ChromeCast, azo alaina ho an'ny iOS sy Android, ary playback mihoatra ny tsara tsy misy fanapahana raha mbola manana fifandraisana Internet tsara ianao. Azo antoka, fampiharana milamina kokoa sy voalamina tsara noho ny maro an'isa amin'ireo izay manolotra ny serivisy fandoavam-bola (vitsy) izay hitantsika eto amin'ny firenentsika, tsy lazaina intsony ny katalaoginy tsy manam-paharoa. Tsy lazaina intsony ny maha-sarotra azy (raha tsy tsy azo atao) ny fahitana sarimihetsika na andian-dahatsary nalefa tamin'ny dikantenin-dry zareo miaraka amina dikanteny anglisy, zavatra takian'ireo mpampiasa bebe kokoa.
PlayBox dia azo apetraka mora foana amin'ny fitaovanao, manizingizina izahay fa tsy mila ny Jailbreak vita. Mazava ho azy fa tsy ho hitanao ao amin'ny App Store izany, fa mila miditra fotsiny ianao ny pejy ofisialy ary kitiho ny rohy mifanaraka amin'izany. Vintana ny tia votoaty VO.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » PlayBox mamela anao hijery sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny fitaovanao tsy misy Jailbreak
Manolo Risco dia hoy izy:
Mandeha lafo vidy (izao eny eny)
Valiny tamin'i Manolo Risco
Miasa ity iray tena tsara ity, mbola tsy afaka nametraka ny dikanteny ho an'ny andian-dahatsoratra aho, diso aho fa hiezaka hatrany
Victor santamaria dia hoy izy:
fampiharana tena tsara, mbola tsy afaka nahazo ny dikanteny amin'ny teny espaniola hiasa ho ahy aho fa resaka mitady fomba mitovy amin'ny kalitao tena tsara
Valiny tamin'i Victor Santamaria
french0507 dia hoy izy:
Afaka mametraka ireo dikanteny omenao ny sarimihetsika na andian-tantara tianao hojerena. Mivoaka ho anao ny milalao. Raha vantany vao milalao ianao, eo amin'ny farany ambany dia misy marika milaza hoe CC. Omenao izany ary ho azonao ilay teny fampidinana dikanteny vaovao, rehefa tsindrio io dia ho hitanao ny lisitry ny fiteny tadiavinao. Eo ianao mitady Espaniôla. Rehefa misafidy Espaniôla dia hahazo safidy maromaro ianao amin'ilay sarimihetsika iray ihany, raiso ilay iray azonao fa ho tsara. Ary ankehitriny, rehefa manomboka ny sarimihetsika dia hanana ny dikanteny amin'ny teny Espaniôla ianao.
Manantena aho fa nanampy anao ny fanazavako.
Valiny amin'ny french0507
PabloHRT dia hoy izy:
Raha ny zavatra azoko jerena dia ny sarimihetsika ihany no manana safidy hametraka dikanteny (misy milaza amiko raha diso aho) satria efa nanandrana amina andiany sasany aho ary tsy nahita ny safidy cc na taiza na taiza, izay tena mampalahelo fa tsy na dia ny afaka mametraka dikanteny amin'ny teny Anglisy aza, antenaina fa ho zavatra izay hovahan'izy ireo tsy ho ela izany satria amin'ity fomba ity dia ho lasa tena mahavariana ilay fampiharana.
Valiny amin'i PabloHRT
Lova Felix Serrano dia hoy izy:
Tsy hitako ilay app amin'ny App Store; Iza no tena anarany?
Valiny tamin'i Félix Serrano Herencia
Alfredo Ruiz sary placeholder dia hoy izy:
Araho ny rohy dia tsy ao amin'ny AppStore !! Amin'ny teny anglisy ihany, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Alfredo Ruiz
Oscar Soriano dia hoy izy:
Alvaro Soriano placeholder image
Valiny tamin'i Oscar Soriano
David Perales dia hoy izy:
Buf, amin'ny teny anglisy daholo na amin'ny ankamaroany ... ho an'izay, mampiasa ny tranokala Pordede aho fa tsy ity
Valiny tamin'i David Perales
Tsy ao amin'ny AppStore, tsy hitondra fifandirana ao amin'ny iPhone ve izany amiko? Raha tsy mampakatra azy ao amin'ny appstore-ny i apple dia satria tsy matoky an'io application io izy ary noho io antony io dia hanafoana ilay taratasy fanamarinana izy io ary hijanona tsy hiasa intsony.
Mamaly an'i Facundo
Fred cross dia hoy izy:
Tsara raha misy dikanteny 👍
Valiny tamin'i Fred Cruz
Subtitled? Mandehana ary raiso ny borikinao
manana guasa dia hoy izy:
Tsy haiko raha fantatrao (ianao sy ny mpamakinao) fa eto ianao dia miresaka momba ny fomba tsy ara-dalàna izay azo saziana, ary isainao ho toy ny zavatra mahazatra indrindra eto an-tany izany. Tsy haiko tsara hoe hanao ahoana izany amin'ny Playbox, fa ny Popcorn Time dia mampidi-doza tokoa, satria na dia toa streaming tsotra aza izy io, raha ny tena izy dia mpanjifa torrent no ampiasaina, noho izany mahatonga ilay mijery ilay horonan-tsary apetraho izy hanodina ny volan'ny sasany. Misy firenena maro izay mety hitondra anao olana maro, any Alemana ohatra, misy onja onitra goavana amin'izany, ny habetsaky ny sandan'ny vola hatramin'ny 815 euro eo ho eo.
Heveriko fa hanana mpamaky maro hiparitaka eran'izao tontolo izao ianao, ary amiko dia matoa ianao miresaka zavatra tsy ara-dalàna dia tokony hanana fahatokiana farafaharatsiny hanazava izany ianao ary hampitandrina ny amin'ny loza mety hitranga.
Mamaly an'i hasguasa
Raha tianao dia hanokana lahatsoratra iray momba ny maha-ara-dalàna na tsy ara-dalàna ireo tambajotra P2P izahay, fa any Espana kosa, amin'izao fotoana izao, ara-dalàna tanteraka ny fampiasana, famoronana ary fanaparitahana ireo karazana tambajotra ireo. Tompon'andraikitra amin'ny fampiasana azy ireo ny tsirairay. Tsy fantatro ny toe-draharaha ara-dalàna an'ny tambajotra any amin'ny firenena sisa, ary ho fantatrareo fa tsy azonay atao ny manazava amin'ny lahatsoratra iray izay miresaka momba ny fampiharana ny loopole ara-dalàna rehetra manodidina azy, ary koa ireo toe-javatra samihafa afaka miseho isaky ny avy amin'ny firenena manerantany. Ao amin'ny lahatsoratra dia manazava izahay fa misy ity fampiharana ity, ny zavatra ataony, ary eo ambanin'ny andraikiny ny tsirairay hanao izay tiany na heveriny fa tokony hataony.
akarta dia hoy izy:
Fa hey, ity dia efa vitan'ny VLC nefa tsy manome lanja azy.
Mamaly an'i akarta
Ahoana no anaovanao ny dikanteny Espaniola?
Mamaly an'i ariel
Fran Hail dia hoy izy:
Ity fampiharana miaraka amin'ny zava-drehetra amin'ny teny espaniola ity dia ho lafo be. Manantena aho fa hanao izany tsy ho ela izy ireo
Valiny tamin'i Fran Hail
Ximena Andica Upegui dia hoy izy:
Tena tsara ny manana finday maoderina vaovao
Valiny tamin'i Ximena Andica Upegui
Hugo De La Rosa dia hoy izy:
Fampiharana tsara fampiharana kokoa amin'ity karazana ity
Valiny ho an'i Hugo De La Rosa
Francisco Mtz dia hoy izy:
Eto ny rohy http://playboxhd.com/downloadios/
Valiny tamin'i Francisco Mtz
Tsy nahazo ny dikanteny anglisy akory aho mba hiasa amin'ity andiany ity, raha misy olona tsara fanahy manazava amiko dia tena tiako izany. Miarahaba!
Ismael Hernandez Pedraza dia hoy izy:
Valiny tamin'i Ismael Hernández Pedraza
Noel dia hoy izy:
Ahoana ny fomba hametrahanao ireo dikanteny amin'ny teny espaniola? Tsy afaka mahita aho
Valiny tamin'i Noel
Mandra-pahoviana ianao no maka sary mihetsika? miandry ahy foana aho ...
Andrihus23 dia hoy izy:
Salama, aloha afaka misintona ny sarimihetsika na andian-tsarimihetsika hafa sns, tsy maintsy avelanao hanomboka ny sarimihetsika ary omenao fampidinana toa izao raha misintona izy ary tsy hiseho ny hafatra miandry. Ary ireo dikanteny amin'ny sisiny ankavanana dia miseho ny fiteny omenao azy ary mitady Espaniôla amin'ny teny anglisy ianao ary misafidy azy, ary avy eo omenao azy fotsiny ny dikanteny ary hasehony anao amin'ny Espaniola. Farany, nanana boaty filalaovana napetraka aho saingy nijanona tsy niasa ary tsy azoko atao ny misintona azy amin'ny olon-kafa. Izany no mitranga. Ary ahoana no fomba hamahako azy
Valiny tamin'i Andrihus23
Avergoon dia hoy izy:
Androany tsy misokatra amin'ny iPad intsony izy.
Misy mahalala ve izay mitranga?
Mamaly an'i Avergoon
Afaka midina any Kolombia ve ianao? Aiza?
Valiny amin'i JESSICA
javiera dia hoy izy:
Roa andro no tsy nisokatra tamin'ny ipad ary mbola tsy voavaha, misy vaovao ve?
Valiny tamin'i Javiera
Tsy misokatra ho ahy izy io ary noho izany tsy mandeha izy. Fa misy inona, misy mahalala ve?
Ao amin'ny 6 Plus misy ahy amin'ny iOS 8.1.2 dia novaina tamin'ny andro lasa izay tsy mandeha izy.
Salama. Sintiko ny sarimihetsika fa tsy milalao izy ireo rehefa tsy manana fifandraisana Internet aho. Misy manampy ??
Miaraka amin'ny 8.1.3 dia tsy mandeha amiko izy io, miaraka amin'ny kinova taloha.
Belen dia hoy izy:
Ny ahy manohitra 6 plus dia tsy mety manampy ahy hamaha
Mamaly an'i belen
Mbola tsy nisy izany
Hiampangana. Ny hafatra dia: "tsy azo atao entana". Hanangana na hanavao ny iOS 8.1.3 ve ianao?
Tsy afaka misintona azy aho, tsy mahazo rohy fampidinana ary tsy mandeha ilay iray etsy ambony, misy mahalala ve izay mitranga?
Javito dia hoy izy:
Ny rohy fametrahana dia tsy miseho amin'ny tranokala ofisialy
Mamaly an'i Javito
Tsy misy vaovao momba ny fampiharana?
HELLO FA AZON'OLON'OLY MANAMPY AZY HATAKO NY LOHATENY SY NY FILMA FA AMIN'NY Fotoana hijerena ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny televiziona APPLE IHANY AMIN'NY TELEVISION TSY AZO JEREO ireo sarimihetsika ary ireo mpahay siansa dia azo jerena ao anaty CUBE.
Hankasitrahako ny fanohananao
Salama, izaho manana an'io olana io ihany. Nahavita nanamboatra azy ve ianao?
Mamaly an'i alfred
Mila fanampiana aho, amin'ny findaiko, hitanao ilay sarimihetsika misy dikanteny fa rehefa alaina ho hitako amin'ny PC dia tsy miseho ireo dikanteny izay tsy hitako.
Toy izany koa no mitranga amiko amin'ny iphone 6 dia hitako tsy misy olana ny sarimihetsika sy ny dikanteny, fa rehefa ampitaiko amin'ny fahitalaviako amin'ny alàlan'ny chromecast na apple tv izany dia ny sarimihetsika no jereko fa tsy ny dikanteny. Misy mahalala ny antony? sa ahoana ny fanamboarana azy?
Olana mitovy amin'ny dikanteny Espaniôla raha efa te-haneho azy amin'ny fahitalavitra aho. Vonjeo.
Edgarvega dia hoy izy:
Mamaly an'i Edgarvega
Jordy dia hoy izy:
Tsy milalao ny sarimihetsika Mahazo doka diso aho ... Misy afaka milaza amiko ve ny fomba hamahako azy?
Valio i Jordy
SILERS18 dia hoy izy:
fampiharana tsara dia tsara, miaraka amin'ny popcorn dia tsy afaka manemotra ilay dikanteny ianao, noho izany dia mahazaka ny hafainganan'ny sarimihetsika ianao ...
Valiny amin'i SILERS18
Hatsarao tsara ny fampiharana
Fampiharana karama azonao sintonina maimaim-poana anio (20/01/2015)